Mining mitemo: zvakawanda, kunonoka - China JP Metal & Equipment
The-refu akapikisana yakabvumira kugadziriswa kwemutemo wekuita kuti mugodhi mitemo ano zvava Musanyura pasi zvikanganiso nzira uye vokupedzisira yemaminitsi kuwedzererwa kuti zvichaita kuvhura kuti yepamutemo dambudziko.
Kunyange kana Mineral & Petroleum Resources Development Act (MPRDA) Amendment Bill akapfuura nekereke National kusangana mushumiri Mosebenzi Zwane yakapikirwa magumo-June wava, zvingangoita kuti kukundwa munyika Romutemo. Izvi kuchawedzera kunyanya kusaziva kuti zvekutepfenyura mugodhi.
The yakabvumira kugadziriswa kwemutemo wekuita vave inching kuburikidza mumatare kwemakore anenge matanhatu, pakutanga nokuti vachishorwa kubva mugodhi indasitiri. Shanduro pakupedzisira vakabvumirana, izvo akabvumirwa neparamende uye akatumira President Jacob Zuma, kuti nemasaini, akatumirwa shure nekuti Zuma akamutsa nezvemhosva kukwana pachena zano mapurovhinzi nevatungamiriri tsika, uyewo mukana kuti kuvhunika muzvibvumirano.
Nokufamba yokubvunza enyika, weDhipatimendi chicherwa zvinhu zvino vakaudza kuti vakasuma mumwe 57 yakabvumira kugadziriswa kwemutemo wekuita. DA mumvuri chicherwa pfuma gurukota James Lorimer anoti vazhinji vavo kugadzirisa chaitwa nemakambani mafuta uye gasi, asi pane vamwe kuti vari kupfuura zvinovhiringidza.
Chimwe ndechokuti kuti akodzere madiki mvumo mugodhi (makore matatu nguva uye kukwira kusvikira 3ha pamwero) makambani anofanira kunge mutema zvarinoroora 50% ndinoiitawo mumwe mugove. Lorimer inoti iri kunyanya kuomera alluvial nedhaimani miners kuzadzisa. Pamwe muridzi zvinodiwa zvakafanana Eskom nokuda marasha zvokuvakisa, uyewo anotumira nyevero chiratidzo chikuru migodhi makambani zvichibvira kuitika yemberi yemigodhi bumbiro.
Panguva iyoyowo, achangobuda yakabvumira kugadziriswa kwemutemo wekuita regai kutaura zvakawanda nouchapupu zvinokunetsa, dzakadai nechokwadi Zuma pamusoro muzvibvumirano nemunharaunda 'okutsutsumwa kuti bhiri infringes pakodzero dzavo.
Mushure dzematunhu yokubvunza, bhiri zvichabviswa mvumo vaviri dzimba paramende zvakare. Tendero zvingangodaro, nokuda kuti ANC kuti ruzhinji, asi hahuzongoparari kuzadzisa chero chokwadi kupiwa mukana wokuti nekutambira matambudziko pamusoro nzira uye kugutsikana, Lorimer anoti.
Mutauriri Chamber of Mines rinoti kamuri anoziva itsva yaida yakabvumira kugadziriswa kwemutemo wekuita uye akapiwa mukana kuti submissions kune dzematunhu legislatures uye kanzuru enyika (NCOP).
Peter Leon, naye pana Herbert Smith Freehills SA, haatendi kuti dhipatimendi anogona kushandisa vemutungamiri zvivabatsire ari bhiri pamativi enyika kusuma yakabvumira kugadziriswa kwemutemo wekuita itsva kunze kuri kuitwa kuti zvivabatsire.
Maererano vagari nemitemo yeparamende, kana mutungamiri zvinoreva rugwaro kudzokera reparamende, iro Portfolio Committee anofanira kurayira reVanodzika kuramba wenyika kunenge uye kutumira bhiri kwaari, kuti rescind kana hazvigoni kugadziriswa, kana kuti kugadzirisa kugadzirisa mhosva neimwe nzira.
Kana ungano yenyika inoreva bhiri kuti NCOP kugadzirisa imwe kuremara vanozivikanwa mutungamiri, uye NCOP komiti rinopfuura chisarudzo kudaro, izvozvo rinongoitwa wenyika ndishushikane.
Muchiitiko chino, Reservations iwayo kuti zano nguva yakanga compressed uye kuti kukwana chiziviso akapiwa evoruzhinji hearings dzaidzidziswa dzematunhu legislatures.
Leon anoti zvinoratidzika zvakarurama muitiro haana vakatevera. The NCOP sarudzai komiti havagoni kuita chero yakabvumira kugadziriswa kwemutemo wekuita kuti chiito vamwe pane vaya vari Amendment Bill pasina chisarudzo maererano plenary NCOP kupa mvumo. Hazvina kutsvaka zvakafanira mvumo vasati vatanga yaro neruzhinji kwacho March 2014.
"With Panyaya mamwe yakabvumira kugadziriswa kwemutemo wekuita hwakatangwa muDhipatimendi, tiri maonero kuti murayiro asingagoveri chero yakabvumira kugadziriswa kwemutemo wekuita Panguva iyi zvemitemo muitiro," anodaro Nicola Jackson, mumwe nomumwe ari mutemo yakasimba Fasken Martineau. "The NCOP haagoni natsai bhiri kuti aitaurwa kudzokera paramende kubudikidza purezidhendi tichitarisa muchikamu 79 of bumbiro.
"Sumo yacho yakabvumira kugadziriswa kwemutemo wekuita itsva parutivi dhipatimendi Naizvozvo mukana akapikisana."
Jackson anoti dhipatimendi dzakatsigira zviri kukurukura zvose yaida yakabvumira kugadziriswa kwemutemo wekuita pamwe vaifarira uye ine kumapati uye achapa makopi richaitirwa yakabvumira kugadziriswa kwemutemo wekuita pamusoro chikumbiro.
The Legal Resources Centre raMwari Henk Smith zvinowirirana Leon kuti vagari mitemo yeparamende hatibvumiri kuti pakatanga 57 yakabvumira kugadziriswa kwemutemo wekuita ikozvino. Chero zvazvingava, bhiri uye yakabvumira kugadziriswa kwemutemo wekuita vasazozviona kugadzirisa nharaunda 'kunetsa uye chaizvoizvo sanganisa iri shoma munharaunda kuita magetsi chiito, anoti.
Lorimer inoti chiito yakazarukira kupikisa anowedzera mamwe investor Kusava nechokwadi, asi kuti kuchinja kuti mugodhi bumbiro kuitwa ose makore mashanu vari kuvaka chokwadi mugadziriro chero zvazvingava. Zvinonzi kuva zvakawanda pachena pasi kuitika utungamiriri wedhipatimendi kuti SA kuti mugodhi utongi nechinangwa kungotaurwa pane kupa kodzero dzokuchechi, akavhiringidza anoti.